[Eng Sub] NOT ME เขา...ไม่ใช่ผม | EP.1 [4/4] - MY - Stindx.com
ဟေ့ Yok! မင်းတို့ဘာလို့ မြန်နေကြတာလဲ ငါမင်း wrap ဖို့ ဆိုင်ကယ်ယူလာပေးတာ မဟုတ်ရင် ဒီည မမီဘဲနေမယ် ငါစီစဉ်ထားလိုက်မယ် ငါပစ္စည်းသွားပြင်လိုက်ဦးမယ် မြန်မြန်ပြန်လာနော် ဘယ်လိုလဲ Yok (ဘာလဲဟ စကားပြောလဲ ပြန်မပြောဘူး) မင်းလုပ်တာ လှတယ်နော် မင်းငါ့ကို မြှောက်နေတာလား ရွဲ့နေတာ မင်းရောလှတယ်ထင်လို့လား ငါထင်တာတော့မလှဘူး ဆိုင်တယ် wrapတာပဲကို မင်းဘာတွေမျှော်လင့်နေတာလဲ မင်းလိုချင်တဲ့အတိုင်း ရချင်ရင် မင်းဘာမင်းလုပ် မင်းဘာလုပ်မလို့လဲ ငါအိမ်သာဝင်မလို့ မင်းလာလိမ်မနေနဲ့ မင်းငါ့အခန်းထဲ ဘာစောက်လုပ်လုပ်မလို့လဲ ဟို.. ငါ.. မင်း ဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ Ai’Sean မင်းဆိုင်ကယ် ဆီယိုနေတယ် လာကြည့်ဦး ဘယ်လိုယိုတာလဲကွ (ဒီကောင့်ကြည့်ရတာ Au’Black ကို မကြိုက်တဲ့ပုံဘဲ) (သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းမျက်နှာတွေ့တာနဲ့ ထိုးမလို့တဲ့လား) ဘာစိုက်ကြည့်နေတာလဲ မင်းက စိုက်မကြည့်ပါဘူး မြင်နေရတယ်လေ စိုက်ကြည့်နေတာကို ငါမင်းလုပ်တာ သပ်ရပ်ရဲ့လားလို့ လာကြည့်တာ အဲ့တော့မင်းက ငါ့ဆိုင်ကယ်ကို ဘာတွေစိတ်ဝင်စားနေတာလဲ ကိုယ့်ဆိုင်ကယ်ကိုကိုယ်တောင် ယူမလာဘဲ စောက်ရမ်း ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်တယ် ဆိုင်ကယ်ဆီ သွားယူလာစမ်း (ဆိုင်ကယ်ဆီ ဘယ်ဟာလည်းကွ ) ရော့ မင်း ငါ့ကို တမင်သက်သက် စတာမလားကွ
ငါတမင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး ငါတကယ်မတွေ့တာ မင်းလည်းသိနေတာပဲ ငါဆိုင်ကယ်ဆီလဲနေတယ်ဆိုတာ အဲ့တော့မင်းငါ့ကိုဒီဗန်း ဘယ်မှာသွားထားခိုင်းမလို့လဲ ငါကဒီမှာပဲထားမှာလေ မဟုတ်ဘူးလား ငါတကယ်မမြင်ပါဘူးဆို ငါတမင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ မင်း ဒီလာခဲ့ မလာဘူးပေါ့ဟုတ်လား မလုပ်နဲ့ မလုပ်နဲ့ လွှတ်စမ်း နည်းတောင်နည်းသေးတယ် ငါတစ်ယောက်တည်းတော့ အပေမခံနိုင်ဘူး မလုပ်နဲ့ ဘယ်သွားမလို့လဲ မင်းကပ်မလာနဲ့ အဲ့မှာ ရပ်နေ ရပ် ငါပြောနေတယ်လေ .. ရပ်လို့ လာခဲ့စမ်း.. မင်းပြေးမလွတ်ပါဘူး မင်းတို့ ဘာတွေဆော့နေကြတာလဲအဲ့ဒါ (ဘယ်သူလဲကွ) ဟာကွာ... ကြမ်းပြင်လည်းပေကုန်ပြီ ခွေးကောင်တွေ မင်းသိရဲ့လား အဲ့ဆီတွေ ဆေးရခက်တယ်ဆိုတာ တောင်းပန်ပါတယ် ကိုကြီး Ai’Black စောက်ခွက်လာပြောင်နေလို့ဗျ အေး .. မင်းရေမြန်မြန်သွားချိုးတော့ ဒီည စကားပြောစရာတွေရှိတယ် (ဒီည?) (ဒီည.. ဘာစောက်ကြောင်းတွေရှိပြန်ပြီလဲဟ) မြန်မြန် ကားဆေးတဲ့နေရာမှာ သွားချိုးနော် မဟုတ်ရင် ငါ့ရေချိုးခန်း ပေကုန်မယ် ဟုတ် မင်းရောပဲ ပြောင်လည်းမပြောင်ဘူး မင်းဆပ်ပြာသုံးနေတော့ ဘယ်ပြောင်မလဲကွ အဲ့တော့ ဘာသုံးရမှာလဲ အဝတ်လျော်ဆပ်ပြာမှုန့်ပေါ့ မင်း ဘာလုပ်တာလဲ မင်းဘယ်ချိန်တည်းက ဒီလောက်အထိမခံဖြစ်သွားတာလဲ ရေမြန်မြန်ချိုး ငါဆိုင်ကယ် သွားပြင်ရဦးမှာ
ဒီညမမီဘဲနေမယ် မင်းသွားနှင့်လေ ငါရေဆက်ချိုးနေလိုက်မယ် အဲ့တော့ ငါက မချိုးရတော့ဘူးလား မင်းက အဲ့ဒါသုံးပေါ့ ငါကတော့ ဒါသုံးမယ် အေး မင်းသေချာ wrap ရဲ့လား Yok သေချာတယ် ကိုကြီး လုပ်လေ ကျွန်တော့်ကို နံပါတ်အသစ်ပေးဦး ကိုကြီး အင်း ရွေးလိုက် ဟင်.. ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့ တဲ့! ဘယ်မှာ နှစ်သစ်ကူးသွားနွှဲမလို့လဲ တစ်ခါတည်း အောင်ပွဲပါ ခံလိုက်ကြမလား ငါဒါပဲယူတော့မယ် စောက်ရမ်းအတုမှန်း သိသာတယ်ကွ ရော့ ကိုကြီး (ဒီကောင်တွေ ဘာလုပ်နေတာလဲကွ) Ai’Sean လာပြီလား ရွေးလိုက် အားလုံး ပြီးရင် ဒီမှာလာစုကြ ရော့ ငါ ငါတို့ ဂိုဏ်းအတွက်မျက်နှာကာအသစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပေးတယ် ဒီတစ်ခါ အဆင်က ထူးဆန်းနေလိုက်တာ ဟမ် ထူးဆန်းတော့ ကောင်းတာလားမကောင်းတာလားကွ ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာ ငါ့အတွက်က ကောင်းတယ် ဒါပေမဲ့ Ai’Black ရဲ့ ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာတော့ စောက်တလွဲပဲ ငါထင်တာတော့ အဲ့ကောင်စိတ်ထဲ ဘာတစ်ခုမှ စောက်ချိုးပြေတာ မရှိဘူးထင်တယ် မင်းတို့ဆဲနေကြတာ အဲ့ကောင်ဒီမှာရှိမနေသလိုပဲနော် နောက်ဆုံးတော့လာပြီလား Black ငါ့ဘာငါ ဒီလိုဖြစ်နေတာ ဘာဖြစ်လဲ ရော့ မင်းဒီနေ့ အဆင်သင့်ဖြစ်ရဲ့လား ဖြစ်တယ်.. ငါအမြဲတမ်းအဆင်သင့်ပဲ! အိုကေ ငါမင်းတို့ကို နောက်တစ်ခါ plan အကြောင်းထပ်ပြောမယ် ဆီပန့်အဟောင်းဆီ ရောက်တဲ့အချိန်ကြရင် Ai’Yok မင်းဖွက်ထားတဲ့ ဆီတွေကိုထုတ်လာ သယ်နိုင်သလောက် ဆီတွေကိုသယ်သွား Gram မင်းက သေချာစောင့်ကြည့်ရမယ်နော် အိမ်ထဲမှာ ဘယ်သူမှ မရှိတာ သေချာအောင်စစ် Ai’Sean မေ့ဆေးအကြောင်းက မင်းသိတယ်မလား
မင်းတကယ်လို့လွဲခဲ့ရင် လိုအပ်သလောက်ပဲအားသုံးပြီး ကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာ Ai’Black သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာရောက်ရင် မင်းက အားလုံးကိုနေရာတကျဖြစ်အောင် စီစဉ်ရမယ် မင်းငါပြောတာနားလည်လား အိုကေ အခုငါပြောလိုက်တာတွေကို နားမလည်တဲ့လူရှိသေးလား ကံကောင်းပါစေကွ သတိလည်းထားကြဦး မင်း ဒီနေ့တကယ်အဆင်သင့်ဖြစ်ရဲ့လား အင်း ဒါဆို မင်းငါ့ဆိုင်ကယ်ဆီလာခဲ့ ဦးထုပ်လည်းယူခဲ့လေ သွားမယ်! Ai’Tawi အိမ်ကို မီးသွားရှို့ကြမယ်! Directed by Anucha Boonyawatana Black. မင်း ဘာလုပ်တာလဲ မင်း အားလုံးကို ဒီမှာသေစေချင်လို့လား ငါထင်တာတော့ ဒါကပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းပဲ ချီးပဲကွာ Gram! မင်းပြောတော့အိမ်ထဲမှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆို မင်း အာရုံစိုက်ထား ငါ နှုတ်ထွက်တယ် Translated by Off_Gun Myanmar Fanpage